20-ka Febraury 1982: Maalin Dhiidhi Dhallinyaro iyo Kacdoon Dadweyne! | HAYAAN NEWS
20-ka Febraury 1982: Maalin Dhiidhi Dhallinyaro iyo Kacdoon Dadweyne!
Silsilad maanseeddii Deelleyda ayaa cirka ku shareernayd oo sannadahaas cusbayd oo qaran iyo qabyaaladdii dawladdu macasha jiidaysey u kala garqaadaysey. Silsilad maanseeddii soo-jireenka faca weyn ahayd ee Guba ee diradiraha beelaha qabaa’ilka ku saabsanayd ee ruug-caddaagii Qamaan Bulxan, Salaan Carrabey iyo Cali Dhuux ay hormuudka u ahaayeen, ayaa boodhka laga afuufay, dibna loo soo nooleeyey oo weriyayaashii ugu caansanaa ee ugu cod-karsanaa Raadyow Muqdisho laga qayb geliyey oo inta cajelado lagu soo cabbeeyey suuqa lagu soo farraqay. Waxa kale oo aad suuqa soo galay silsiladdii Hurgumo ee Khaliif Sh. Maxamuud iyo Dhirbaaxo Jaan ay maansooyinkeeda hore isku weydaarsadeen, markii dambe se rag badani ka qayb galay. Waxa laga daba keenay gabayadii kale ee Ergo Daarood oo dawladdu iyana ka dambaysey curinta iyo suuq geyntoodaba. Intaas iyo in kale oo badan oo ka daba dhacday oo illaa qudh-gooyo iyo gumaad ku siman, ayaa ka dhabeeyey in la gaadho oo haddana lagu gubto intii la doonayey oo ahayd in dadka daahyo waa weyn oo wada shaki iyo cuqdado qabali ah la dhex dhigo, si loogu dul amar-ku-taagleeyo macaash ahaan.
Jabkii maalintaas ka dhex abqaalmay ardadayadii wada muddaharaadaysey ee dugsigii Sare ee Gacan Libaax ee magaalada Hargeysa, waa kaas illaa maanta sii socda ee la soo dabbaali la’yahay ee sida cudurka dilaaga aan bogsiinta qumman lahayn ee “Kansar-ka” ugu sii faafaya xididdada iyo halbawlayaasha dhiig-wadeennada ee dadka Soomaalida meel kasta ha joogaane intooda ugu badan. Waa kaas jarjaray ee sida qurub qurubka ah u kitfay xubnihii iyo jidhkii ummadnimo; haddii ay garasho u tahay, is daawaysi u tahay, walaaltinnimo iyo midnimo u tahay, isu hiilin iyo is weheshi u tahay, ummad talo iyo hoggaan leh u tahay, qaran sharci iyo caddaalad fuliya u tahay, ummad cududdeeda midaysa oo ku cad goosata ama isku difaacda u tahay, intan iyo intaas oo kale u tahay iwm! Waa taas la kala diday ee la kala hadfey sidii adhi weere galay ee Soomaalidu u kala firidhay sidii quraarad sar dheer oo toban dabaq ah dusheeda ka soo dhacday oo waddo laami ah bashkalalax ku tidhi oo budowdey. Haba kala durugto’e waa taas qolo kasta halkeeda surbacaadka ku ah ee ku kala higgoonaysa ee qoloqolada hoose u sii kala feedho-gurmaysa.
Haddii shalay (1983) Isaaq iyo Daarood xaajadu joogtey oo taas lagu waayey wixii la wada lahaa iyo astaamihii ummadnimo (Soomaaliya), saw maantaba (2018) ma taallo tu la mid ah oo ka sii hoosaysaa oo reero iyo qabaa’il uun ku salaysan oo ummadnimada (Somaliland) sadhayn karta oo sida taas hore kala daadin karta.
“Geeraarku waa sude hadduu kuu ged-bixi waayo
Adba goor is weyddii intuu gabaygu kaa dhaafo”.
Hadraawi: Gudgude 1990.